समुदायस्तरमा कोरोना फैलिएपछि बजार बन्द गराउन सेना परिचालन – Nepal Japan
समुदायस्तरमा कोरोना फैलिएपछि बजार बन्द गराउन सेना परिचालन
नेपाल जापान ५ कार्तिक १८:०८
दार्चुला जिल्लाको सदरमुकाम खङ्लगाको समुदायस्तरमा कोरोना सङ्क्रमण फैलिएपछि बजार बन्द गराउन नेपाली सेना परिचालन गरिएको छ । बजारमा पसल बन्द नहुने अवस्था आएपछि नेपाल प्रहरीसँगै सेना परिचालन गरिएको हो ।
महाकाली नगरपालिकाको वडा नं ४ र ५ को बजार सिल गरिएको भए पनि व्यापारीले कानूनको उल्लङ्घन गरेको भन्दै सुरक्षा समितिले सेनासमेत बजारमा खटाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार पोखरेलले बताउनुभयो । अहिले नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाले बजारमा रहेका पसल बन्द गराउने गरेका छन् । व्यापारीले भने सुरक्षाकर्मीलाई छलेर व्यापार गर्ने गरेका छन् । मङ्गलबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेल, सुरक्षा अधिकारीहरुले पनि बजार क्षेत्रको अनुगमन गर्नुभएको थियो ।
महाकली नगरपालिकामा कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिरहेका बेला बजार क्षेत्र निर्वाधरूपमा खुला हुँदा झन् जोखिम बढ्ने प्रजिअ पोखरेलले बताउनुभयो । आज मात्र नगरपालिकाका ५० जनामा कोरोना देखिएको छ । जिल्लामा अहिलेसम्म कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या २५० नाघेको छ ।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर ४४ गण हेडक्र्वाटरमा ६३ जनामा कोरोना देखिएपछि गण सिल गरिएको छ । सशस्त्रको गस्ती बन्द गरिएको छ । नगरपालिकाको मोहती क्षेत्र, बङ्गाबगडलगायतका क्षेत्रमा कोरोना दर बढ्दै गइरहेको छ । सुरक्षा मापदण्ड नपनाउँदा नगरपालिकाको बजार क्षेत्रमा कोरोना सङ्क्रमणको दर बढ्दै गएको जनस्वास्थ्य अधिकृत जयराज भट्ट बताउनुहुन्छ ।
मङ्गलबार मात्रै दुहु गाउँपालिकामा एक पुरुषको कोरोनाका कारण मृत्यु भइसकेको छ । धनगढीमा उपचार गराउँदै आएका नेपाल प्रहरीका पूर्वकर्मचारीसमेत रहेका ती पुरुषको कोरोनाका कारण ज्यान गएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दुहुको वडा नं २ हिकिला क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ ।
दुहुमा एक स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भई आइसोलेसनमा बसिरहेकाले समुदायस्तरमा फैलिन नदिन सिल गरिएको हो । दशैँ, तिहारका कारण बजार क्षेत्रमा भीडभाड भने यथावत छ । बैंक, वित्तीय संस्था र कार्यालय खुला रहेका कारण बजारमा भीड बढेको हो । भारतबाट पेन्सन बुझ्ने व्यक्तिका कारण अहिले बजारमा भीड बढेको छ । पेन्सन बुझ्नेहरुका लागि तीन दिन नेपाल–भारत जोड्ने झोलुङ्गे पुल खुला गरिएको छ । अहिले धनगढी, काठमाडौँ र भारतका विभिन्न शहरबाट आउने व्यक्ति क्वारेन्टिन नबसी सिधैँ गाउँ पठाइँदा गाउँमा समेत सङ्क्रमणको जोखिम बढेको छ ।
निःशुल्क पाइने औषधि पनि बाहिरी किन्नु परेपछि
६५ प्रतिशत बालबालिकाको रगतमा ‘लेड’को मात्रा
तीन श्रम रोजगार पत्रकार पुरस्कृत
मगन्तेको भेषमा पैसा माग्ने भारतीय लखेट्दै प्रहरी
बेलायतमा २४ घन्टामा करिब ४४ हजार कोरोना संक्रमित
११ कार्तिक १७:१६
चैत्रभित्र सबैलाई खोप लगाउने गरी व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन
११ कार्तिक १७:०८
१४ दिनका लाग रु २० अर्बको रिपो जारी गर्दै राष्ट्र बैंक
११ कार्तिक १६:२५
प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनेबारे छलफल भएको छैन : अध्यक्ष नेपाल
११ कार्तिक १६:०२
११ कार्तिक १५:२०
१. शाही घराना त्याग्नुअघि महासम्राटसंग राजकुमारी माकोको विदाइ भेट, आज विवाह
२. बालबालिकामाथि अप्राकृतिक यौनगतिविधि गर्ने विदेशी नागरिक पक्राउ
३. राष्ट्र र जनताको हितको पक्षमा काम गर्छौं : नेकपा अध्यक्ष ओली
४. असोज महिनामा बलात्कारका घटना १९, यौन दुव्र्यवहारका घटना ६
५. भिरबाट लडेर हङ्कङमा पत्रकारिता गर्दै आएका राईको मृत्यु
७. परमादेश ल्याउने सबैलाई हटाउनुपर्दछ भन्नु गैरजिम्मेवार तर्क : प्रधानमन्त्री देउवा